उल्टो सपना भित्र घोत्लिन बाध्य पार्ने ६ कलाकारका कलाकारिता - फ्री प्रेस नेपाल
१५ मंसिर २०७५, शनिबार १६:५७
शिर्षक – महेन्द्रमाला
शिक्षा – स्नातकोत्तर,केन्द्रिय ललितकला विभाग (त्रिवि )
घर – सुनसरी
कर्म – बंगलादेश, कोरीया, भारत र नेपालमा आर्ट प्रदर्शनी
आवद्धता – आर्ट ट्री नेपाल, सदस्य
म स्वंयले महेन्द्रमाला पढ्नु परेन । तर महेन्द्रमालाले बहुसाँस्कृतिक समाजलाई कसरी एउटै साँचोमा ढालेर छिन्नभिन्न पारेको रहेछ भन्ने कुरा पछि मात्र थाहा पाएँ । म तामाङ । मैले महेन्द्रमाला पढ्दा त्यसभित्र आफ्नो तस्वीर नै भेटिएन । त्यहाँ फुलपातीको बारेमा ४–५ पेज छ तर हाम्रो चाडबाड बारेमा केहि लेखिएकोछैन । हामी नेपाली भनेर दशैं पढाईएकोछ । त्यसबारे लामो पाठ राखिएकोछ । राजाका बारेमा चार पाँच वटा पाठ छन् । राजाको दर्शन गरिए पाप पनि कटिन्छ भनेर सम्म लेखिएकोछ । त्यो सबै पढ्दा मलाई आफुलाई फिल हुने – ‘म को हुँ ? मेरो अस्तित्व के हो ? म चाहिं नेपाली हो कि होईन ? महेन्द्रमालाको नेपाली पाठमा म किन नभा’को होला ?‘ मन भित्र यी प्रश्नहरु आउने भएकोले त्यसको जवाफ खोज्दै जाँदा यो काम गरेको हुँ ।
मैले महेन्द्रमाला शिक्षालाई बुझाउन ढुँगाको प्रयोग गरेकोछु । यसो गर्नाको कारण छ । हामी तामाङले ढुँगाको घर बनाउँछौं । यो हाम्रो जिवन र संस्कृतिको अभिन्न अंग हो । अर्काे कुरा, मेरो बुवा नै यहि काम गर्नुहुन्छ । उहाँ ‘स्टोन कार्भिङ्ग (ढुँगा खेपेर मुर्ति बनाउने कला)’ काम गर्नुहुन्छ । मैले बच्चादेखि नै उहाँलाई सघाउँथे । त्यसरी ममा पनि यो कला हस्तान्तरण हुन गयो ।
मैले यसलाई किताबलाई झैं ‘इन्टर्याक्टिव’ बनाएकोछु । एकापट्टि महेन्द्रमालाको कभर छ । अर्काेपट्टि किताबमा भएका पाठ कुदिएकाछन् । फ्लिप गर्न मिल्ने बनाउनुको कारण चाहिं यो न्यारासन पनि हो । महेन्द्रमालाको एउटा पाटो त हामीलाई पढाईयो तर त्यसको अर्काे पाटो पनि छ जुन हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने हो । मैले त्यहि पाटो खोज्ने प्रयत्न गरेको हुँ ।
महेन्द्रमालामा तामाङलाई जसरी प्रस्तुत गरिएकोछ त्यसलेपनि मेरो चिन्तनमाथि प्रभाव पार्यो । त्यहाँ एउटा कथा छ । डाँफेको कथा । त्यस पाठमा एक शिक्षिकाले बिद्यार्थीलाई डाँफेबारे पढाउँछिन् । कथा चाहिं यस्तो छ – ’डाँफे राष्ट्रिय चरा हो । यो हिमालमा बस्छ । हिमालमा लामा दाईहरु पनि बस्छन् । एकचोटी डाँफेले लामा दाईको बिस्कुन खाईदिएछ । बिस्कुन खाएपछि लामा दाईले डाँफेलाई हिर्काएर धपाईदिएछन् । डाँफे अझै उत्तरी हिमालतीर गएर बसेछ । त्यहाँ एकदम जाडो हुन्छ । जाडोमा लामा दाईहरु तराई झर्नुहुन्छ ।’ अगाडि लेखिएकोछ– ‘ तर लामा दाईको डरले डाँफे चाहिं कहिल्यै तराई झरेन ।’
यो पाठमा दिईएको सूचना नै गलत छ । भौगोलिक रुपमै गलत छ । डाँफे हिमालमा बस्ने चरी भएकोले उ तराईमा झर्ने कुरै भएन । यो कथामा बौद्ध धर्म मान्ने र शान्ति र करुणाको अभ्यास गर्ने लामालाई क्रुर पात्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न यो पाठ रचिएको जस्तो देखिन्छ । यो किन गरियो होला ? भन्ने मनमा प्रश्न उठिरहन्थ्यो ।
त्यहि प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा महेन्द्रमाला तयार भएकोछ । तर मेरो महेन्द्रमाला ‘एक भाषा एक धर्म, एक भाषा एक देश’ चिन्तन र त्यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने शिक्षा नीति बिरुद्ध छ ।
शिर्षक – मैले कसरी बिर्सिए मातृभाषा ?
घर – धनकुटा
कर्म – शिक्षक, स्नातकोत्तर,केन्द्रिय ललितकला विभाग (त्रिवि ) ।
प्रदर्शनी – अमेरीका, बेलायत, भारत, कोरीया, दोहा र नेपाल ।
मैले कसरी बिर्सिए मातृभाषा ?
यो आर्टवर्कमा मेरो बुवाले पढ्नुभएको किताबहरुको सग्रंह राखिएकोेछ । मैले उहाकै किताबहरु राख्नाको कारण उहा चाहिं मेरो गाउमा अरुभन्दा बढी शिक्षित हुनुहुन्थ्यो । मेरो बुवा गाउको पहिलो ‘एसएलसी’ हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाले साथीभाईहरुसंग मिलि गाउमा स्कुल खोलेर त्यहिं पढाउन थाल्नुभयो ।
अचम्म के भयो भने स्कुल नखुल्दासम्म हामीले आफ्नै भाषामा बातचित गथ्र्यौ तर स्कुल खुलेपछि हामीले आफ्नो भाषामा कुराकानी कम गर्न थाल्यौं । मेरै बुवाले ‘आफ्नो भाषा नबोल पढ्न गाह्रो हुन्छ ‘ भनेर सिकाउन थाल्नु भयो ।
तत्कालिन सत्ताको एक भाषा एक धर्म नीतिका कारण उहाँले त्यसो गर्नुभएकोथियो । त्यसले हाम्रो भाषा संस्कृतिमाथि नराम्रो प्रभाव पार्यो । आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति नै उपेक्षाभाव जाग्दै गयो । हामीले त लेख्य नभई कथ्य परम्परामा आफ्नो भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आइएको हो । पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई सुनाउँदै हाम्रो इतिहासको हस्तान्तरण भएको हो । हजुरबुवा र हजुरआमाले हामीसंग मातृभाषामार्फत संवाद गर्नुहुन्थ्यो । हामीले नेपालीभाषालाई जोड दिन थालेपछि त्यो नै ब्रेक हुन गयो ।
सत्ताले घोकाउने महेन्द्रमालाको ‘एक भाषा एक भेष, एक धर्म एक देश’ शिक्षाले त्यसलाई ठ्याक्कै रोक्यो । पछि विस्तारै त्यसले हाम्रो भाषालाई निल्न थाल्यो । हामीलाई पुरानो पुस्ताबाट प्राप्त हुने साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक ज्ञान हस्तान्तरण हुन पाएन । बरु नेपाली शिक्षा मार्फत एक धर्म, एक भाषा र एक जातिको वर्चश्वगान घुसाउन थालियो । अहिले त्यतिबेलाको शिक्षाले कालान्तरमा पारेको असर र प्रभावको समिक्षा गरिहेर्दा त्यसले हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई बिलोप गराउन केन्द्रिय रोल खेलेको देख्छु ।
१०४ बर्षे निरंकुश राणाशासनले समेत मास्न नसकेको हाम्रो भाषा र संस्कृति पन्चायतको शिक्षा नीतिले मास्दैगयो । एकात्मकता लाद्दै गयो । म आफै लिम्बु भएकोले मैले लिम्बु डिक्सनरीलाई यहाँ प्रयोग गरेकोछु । लिम्बु डिक्सनरीमा भएको आफ्नो भाषालाई मेटेर पृथ्विनारायणशाहको दिब्योपदेश भनिएको ‘एकजातीय नीति’ पक्षपोषण गर्ने ‘असिल हिन्दोस्तान’ जस्ता श्लोकहरु राखिदिएकोछु । त्यतिबेला लागु गरिएको भेदभावपूर्ण नियम कानुनहरु पनि राखेकोछु ।
सत्ताले पहिला शिक्षालय खोल्यो । ‘एक भाषा एक भेष, एक धर्म एक देश’ अनुरुप पाठ्यक्रम बनाउने काम भो । बच्चालाई दिमागी रुपमा आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृतिबाट च्यूत गरायो । आफ्नो शिक्षा घुसायो । त्यसपछि राज्यले नीति नियम बनाएरै त्यसलाई लागु गर्यो ।
भनाई नै छ, ’कुनै जातिलाई नष्ट गर्नुपर्यो भने पहिला उसको भाषा मारिदिनुपर्छ ।’ राज्यले नीति बनाएरै यहाँका जातिहरुको भाषा मार्यो । यसरी हामीलाई पंगु र मानसिक दास बनाउने खेल रचियो । अहिले हामीले त्यसैको फल भोगिरहेकाछौं ।
पहिला दिल र दिमागमा नेपाली राज्यको भाषिक साम्राज्य लादेर दास बनाईयो । भर्खर भर्खर यो यथार्थ बुझ्न थालेकोबेला फेरि अर्काे बज्रपात आईलागेकोछ । अहिले बिश्वब्यापीकरण र श्रम बजारको फैलावटले अन्य अन्र्तराष्ट्रिय भाषाले त्यसमाथि थप आक्रमण गरि थिचेकोछ । रेमिट्यान्समा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रका कारण हामी झन बढी साँस्कृतिक क्षयीकरण ब्योहोरिरहेकाछौं । हामी जस्ता राज्यको नीतिले पीडितहरुलाई अहिले विश्वबजार र त्यसको साँस्कृतिक आक्रमणले थिलोथिलो पारेकोछ ।
मेरो कलाले त्यहि कुरा बुझाउन प्रयत्न गरेकोछ ।
शिर्षक – कतिसम्म जलाईरहने ?
शिक्षा – स्नातकोत्तर, केन्द्रिय ललितकला विभाग (त्रिवि )
कर्म – विश्वका एक दर्जन भन्दा बढी देशमा कला प्रदर्शन
आवद्धता – आर्ट ट्री नेपालको संस्थापक सदस्य
गृहजिल्ला – लमजुङ
कतिसम्म जलाईरहने ?
मैले कसरी शासकले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अनुकूलताको नियम कानुन बनाई नेपाली समाजमाथि एकतन्त्रीय शासन लागु गर्न खोज्यो जुन शासनसत्ता विरुद्ध बेलाबखत विद्रोह भो र त्यस्ता विद्रोहले सत्ताको स्वरुप नै परिवर्तन गरिदियो भन्ने देखाउन खोजेकोछु । यी आन्दोलनहरुको स्वरुप फरक फरक छ तर ति भैरहेकाछन् । राजनीतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक त्यस्ता आन्दोलनले हाम्रो चिन्तनधारालाई समेत प्रभावित पार्ने या त्यसले बदलिदो समाजको चिन्तन बुझाउन पनि मद्दत गरेको हुन्छ ।
राणाकाल हटाउन सात सालको आन्दोलन, पन्चायत हटाउन ४६ सालको आन्दोलन, राजतन्त्र हटाउन ६२/६३ को आन्दोलन, मधेस र जनजाति आन्दोलनहरु समाजको चिन्तनको प्रतिविम्ब हुन् । मैले त्यसैलाई यसमा कैद गर्न खोजेको हुँ ।
मैले यसलाई बुझाउन एउटा प्रयोग गरेकोछु । शुरुमा मैले बेलाबखत भएका आन्दोलन, संघर्ष र त्यस सम्बन्धि भएका बौद्धिक लेखन सम्बन्धिका पत्रपत्रिकालाई एकठाउँमा ल्याई जलाएँ । त्यसरी जलाइएका कागज खरानी भएपनि अक्षर चाहिं रहरिहन्छ । मैले ति अक्षरहरुलाई जम्मा गरि तस्वीर लिए र दस्तावेजीकरण गरे । यहाँ भएको ‘आर्काईव’ त्यहि हो । यसमा विभिन्न आन्दोलन सम्बन्धिका बिषयबस्तुहरु समेटिएकाछन् । महिला, मधेस, राजनीतिक, सामाजिक सबै आन्दोलन यसभित्र समेटिएकाछन् ।
घोरिएर हेर्ने हो भने अक्षर पनि मज्जाले बुझ्न सकिन्छ । मैले यो गर्नाको न्यारासन के हो भने सत्ताले जति दबाउन खोजेपनि समाजमा जबसम्म समस्या रहिरहन्छ असन्तुष्टि रहिरहन्छ र त्यो कुनै न कुनै रुपबाट बाहिर आउँछ, आउँछ । त्यो मेटाउछु भनेर मेटिदैन । दबाएर दबिदैन । तर मेरो प्रश्न के हो भने यस्तो खालको संघर्ष कहिलेसम्म भैरहने ? कहिलेसम्म हामीले न्यायिक आन्दोलन गरिरहने ?
तलतीर मैले अहिलेसम्म भएका संघर्षलाई आर्काइब गरेकोछु भने माथि चट्ट सजाएर राज्यले बनाएको कानुनहरु जसले भेदभावलाई संस्थागत गर्ने काम गर्यो, त्यसलाई राखेकोछु, जसमाथि प्रश्न समेत गर्न नपाईनेगरि छेकथुन गर्ने गरिन्छ । काननुनको दण्डा लगाईन्छ । त्यसैले यसलाई मैले विशेष देखाउन सबैभन्दा माथि र सिसाभित्र उज्यालोमा राखेको हुँ भने आन्दोलन र संघर्षका कथालाई तल मधुरो प्रकाशमा राखेको हुँ ।
आलोचना नै गर्न नपाईने माथि राखिएको सिसाभित्र जंगबहादुरको २०१० सालको मुलुकी ऐन छ । अर्काे कानुन मन्त्रालयले २०२२ सालमा बनाएको कानुन र अर्काे चाहिं नेपालको अहिलेको नयाँ संविधान छ, जसमा ठुलो जनसंख्याले असन्तुष्टि सहित प्रश्न उठाईरहेकोछ ।
मेरो भनाई के हो भने असन्तुष्टि जति दबाएपनि त्यो भित्रभित्रै उकुसमुकुस भईरहेको हुन्छ र त्यो कालान्तरमा गई बिद्रोहमा परिणत हुन्छ । त्यो मर्दैन । यता पट्टि बलिरहेको ज्वालाको सिम्बोलिक अर्थ चाहिं त्यहि नै हो ।
शीर्षक – मासिन्या
घर – सर्लाही
कर्म – भारत, कोरीया, बंगलादेश र नेपालमा प्रदर्शनी ।
यसमा मैले सत्ताले गरेको जातविभाजनलाई प्रष्ट्याउन खोजेकोछु । पृथ्विनारायण शाहको प्रापोगाण्डायुक्त जातीय नारा देखि शुरु गरेर जंगबहादुरले लागु गरेको जातीय विभाजनमा आधारित मुलुकी ऐनलाई आधार बनाएकोछु । उसले तागाधारी, मतवाली मासिन्या जातिको रुपमा वर्गीकरण गर्यो । त्यहि अनुरुप सेवासुविधा दिन थाल्यो ।
मासिन्या जातिमा थारु, कुमाल, हायु, शेर्पा, तामाङ जस्तालाई राख्यो । त्यसले थारुमा डरलाग्दो असर पार्यो । कम्हलरी र कमैया त्यहिंबाट शुरु भयो जुन अहिलेपनि कायम छ । २००६ तीर उन्मूलन गरिएको भनिएपनि त्यो प्रथा अद्यापि कायम नै छ ।
मैले थारुको जनजिवनमा प्रयोग हुने घैलालाई माध्यम बनाएकोछु । १३ वटा घैलामा कोरेर बनाएकोछु । थारुको झिझिया नाच हुन्छ । त्यसमा प्वाल प्वाल पार्ने चलन हुन्छ । परम्परागत रुपमा आएको ह’नाले मैले आफ्नो श्रृजनामा प्रयोग गरेको हो । त्यो नाचमा टाउकोमा माटोको पाला (दियो ) राखेर नाचिन्छ । मैले त्यसको प्रतिकको रुपमा ‘एलइडी लाईट’ प्रयोग गरेकोछु ।
यहाँ एउटा घैलोमा एकतन्त्रका प्रतिक महेन्द्रको श्रीपेंच छ । यो घैलाबाट उनको एकजातीय, एकधार्मिक नीतिलाई देखाउन खोजेकोहुँ । उनको पन्चायतकालमा भूमिसुधार लागु भो । त्यसले तराई मधेसका आदिवासी थारुको बिस्थापन सघन हुन गयो । मच्छर पचाएर बसेका थारुको ठाँउमा पहाडबाट बसोबास सार्न मच्छर मार्ने डिटिसी छरियो । त्यसले पनि थारुलाई थाँतथलोबाट बिस्थापन गरायो । त्यसपछि नयाँ खालका जमिन्दारहरु जन्मिए ।
उब्जनिहरु नवआगन्तुकहरुको हातमा गयो । खोस्ता अर्थात पराल मात्र थारुको भागमा रहयो । त्यहि देखाउन मैले यहाँ पराल राखेकोछु ।
एउटा घैलामा संविधानसभा भवन र तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई राखेकोछु । संविधानसभाको पहिचानको कुरा एकदम ‘अमुर्त‘ छ । हाम्रो मुद्दा र समस्यासंग सरोकार नै राख्दैन ।
३ वटा घैलामा टीकापुर घटनाको भित्रि पाटो स्थानीयहरुकै भोगाईमा दर्शाउन प्रयत्न गरेकोछु । थारुहरुमाथि भएको त्यत्रो ज्यादतीमाथि भएको अध्ययन रिपोर्ट नै सरकारले सार्वजनिक गरेकाछैन । लुकाएर राखेकोछ । बिभिन्न आरोपमा थारुहरु बिस्थापित छन् । केहि जेलमा परेकाछन् । जबकि चार चार चोटी सरकारको उच्चस्तरिय अनुगमन भैसकेकोछ । सरकारको नभएपनि लाहुर्निपले गरेको रिपोर्टको आधारमा त्यहाँका थारुका वास्तविकता यहाँ दर्शाउन खोजेकाछु ।
टीकापुर घटनाले के देखायो भने थारुलाई जसरी हिंजोको सत्ताले मासिन्या जातिको रुपमा नियम कानुन बनाएरै चरणबद्ध रुपमा ‘सखाप’ बनाउन चाहन्थ्यो आज पनि त्यसको निरन्तरता रोकिएकोछैन ।
शीर्षक – डेथ अफ सिभिलाईजेसन
घर – पोखरा
कर्म – भारत, कोरीया, बंगलादेश, डेनमार्क र नेपालमा प्रदर्शनी ।
आवद्धता – आर्ट ट्री नेपाल
डेथ अफ सिभिलाईजेसन
पछिल्लो समय सरकारले समृद्धिको नाममा पुरातात्विक र साँस्कृतिक महत्वका घरहरु भत्काई सडक बिस्तार गरिरहेकोछ । यसका निम्ति उसले स्थानीयहरुको सहमति बेगर जर्वदस्ती कब्जा गर्दै यो काम गरिरहेकोछ । विकासका नाममा गरिएका त्यसले एकातर्फ पुरातात्विक धरोहरको नष्ट गरिरहेकोछ भने अर्काेतर्फ त्यस धरोहरलाई रक्षा गर्दै आईरहेका रैथानेहरुलाई बिस्थापित गराईदैंछ ।
मैले बसन्तपुर दरबारको ‘आईसोमेट्रिक भ्यू’ लाई उड कार्भिङ्गमा कैद गरि त्यो अतिक्रमण र बिस्थापनलाई देखाउन खोजेकोछु । यो काम गर्न मैले केहि ईन्जिनियर साथीहरुसंग सहकार्य गरेकोछु । काठ काठमाण्डौको सभ्यतासंग जोडिएकोछ । त्यसैले काठमाण्डौलाई काष्ठमण्डप पनि भनिन्छ । काठमाण्डौ उडकार्विनको चरम अवस्थामा पुगिसकेको थलो हो ।
आधुनिकीकरणसंग हाम्रा पुरातात्विक शहर कसरी संघर्ष गरिरहेकोछ भन्ने यसमा देखिन्छ । त्यो संघर्षमा हाम्रो नीधि हस्तकला विस्थापित भए । यो चित्रमा अलिक टाढाबाट हेर्नु भो भने काठमाण्डौको सभ्यतामाथि बुल्डोजरको बडेमानको पाङ्ग्रा हिंडेको देख्नसक्नुहुन्छ । त्यो देखाउन काठलाई ‘सिएनसी प्रविधि’ बाट कार्भिङ्ग गरिएकोछ ।
टायर नै किन राख्नुपर्ने भो भने हाम्रो मानव सभ्यतामा जब पाङ्ग्राको आविष्कार भयो त्यसले नै हाम्रो सभ्यता मास्न शुरु गर्यो । काठमाण्डौमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ । यहाँ पुरातात्विक सभ्यता र संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन नै छैन । भत्किएको ढुंगाको कार्विन केहि भई भत्कियो भने सिमेन्टले टाल्ने गरिन्छ । अलकत्रा लगाईन्छ । बढेका सिमेन्टका घरहरुले जमिनमुनी पानी संकलन हुनै सकेन । पानीको श्रोत नै सुक्यो । ढुंगेधारा सुक्यो । अब ईनार सुक्दैछन् ।
विश्व सम्पदा सूचीमा परेपछि दरवार स्क्वायरलाई बारेर निर्माण कार्य थालियो । त्यसो गर्दा राज्य त्यहाँ पस्यो । सुरक्षकर्मीको चहलपहल बढ्यो जसले हजारौं बर्षदेखि त्यसलाई बचाईरहेकाथिए । ति स्थानीय बिस्थापित भए । पचास बर्षयता हेरियो भने दरबार स्क्वायर भनेको ईट्टा र काठको कलामा सिमित हुदैं गैरहेकोछ । जबकि त्यो सभ्यता भनेकै मान्छेसंग जोडिएको हुन्छ । तिनका धर्म, भाषा, संस्कृतिसंग अविछिन्न गाँसिएको हुन्छ । त्यो मेटाउन खोजिएकोछ ।
जसको संस्कृति र संस्कार हो त्यो नै त्यहाँबाट बिस्थापित भएपछि यस्ता सम्पदा बिस्तारै मर्दै जानेहुन् । विश्वका कयौं शहरहरु मरेका दृष्टान्टहरु छन् । हाम्रोमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गरेर युएन आयो । तारबार लगायो । त्यसले सम्पदाको जिँउदोपना हरायो ।
अहिले तिनले के महसुस गरेकाछन् भने यस्ता सम्पदाहरु स्थानीयकै जिम्मा दिने हो भने त्यो निर्जिव नहुदोरहेछ, बाँच्दो रहेछ । यसमा उनीहरुले पुर्नसमिक्षा गरिरहेकाछन् । जसरी बन समुदायलाई दिएपछि त्यो हराभरा भएकोछ । बाघहरु बढ्न थालेकाछन्, सम्पदामा पनि समुदायकै संलग्नता आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले हाम्रा सम्पदाका समस्या के भैदियो भने त्यहाँबाट सम्बन्धित समुदाय नै बिस्थापित भैसकेपछि ति सम्पदा किन बनाईएकाथिए ? कसरी र कसले बनाएकाथिए ? भन्ने नै हरायो । बस्तु आफैले इतिहास भन्ने होईन मान्छेले हो । अब त्यसलाई कसरी फेरि हराभरा र जिवित बनाउन सकिन्छ, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
शिर्षक – साँस्कृतिक उपनिवेशीकरण
घर – काठमाण्डौ
कर्म – एक दर्जन भन्दा बढी देशमा प्रदर्शनी ।
आवद्धता – आर्ट ट्री नेपाल, संस्थापक
हामीले इतिहास बुझ्न लिखित इतिहासले मात्र पुग्दैन । त्यस्तो इतिहास जसले लेखेको हो उसले आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको हुन्छ । कतिका लिपि हुदैंन । लिपि भएपनि त्यो ‘डिकोट’ भएको हुदैंन । जस्तै : ‘इन्डोस भ्याली सिभिलाईजेसन’को लिपिहरु अहिलेसम्म डिकोट भएकोछैन । त्यसमा के छ थाहा छैन, अनुमान मात्र लगाउने हो ।
त्यसैले हामीले ईतिहास बुझ्ने हो भने चौतर्फी तरिकाबाट सोंच्नुपर्छ । बहुआयामबाट नियाल्नुपर्छ । मेटेरियल कल्चर (मान्छेको मानव बसोबास, मान्छेले प्रयोग गर्ने सामान, लगाउने लुगा र गरगहना) ले ईतिहासको निरन्तरता गरिरहेको हुन्छ । त्यसलाई कसरी बुझ्ने भनेर मैले सोंचिरहेको हो । मैले सिरिजमा काम गरिरहेकोछु । यहाँ तीन वटा छ ।
माथिल्लो मुस्ताङको गुफामा न्यासनल जिओग्राफिकले उत्खनन गर्दा एउटा कपडा भेट्यो । त्यो कपडा यति महत्वपूर्ण भैदियो कि त्यसले एउटा इतिहासकै पाटो खोलिदियो । त्यो चाईनामा बनेको सिल्कको कपडा रहेछ । त्यो उत्खननपछि त्यो ठाँउ त सिल्क रुटको कनेक्सन पो रहेछ भन्ने थाहा लाग्यो ।
नेपालमा ५९ वटा त सरकारले नै तोकिदिएको आदिवासी समुदाय छ । सबैको आ–आफ्नै किसिमको भाषा, संस्कृति र लवाइखवाइ छ । तिनले लगाउने लुगामा कस्तो खालको सामग्री प्रयोग भएकोछ ? कुन प्रविधिले बनेकोछ ? कस्तो साईन्स र म्याथ त्यसमा प्रयोय भएकोछ ? कुन रंगले त्यसलाई रंगाइएकोछ ? त्यसमा हाम्रो संस्कृति र इतिहास जोडिएको हुन्छ ।
मैले यहाँ ३ वटा जातिको ड्रेसलाई हरेकोछु । पहिलो नेवारी समुदायका किसानले लगाउने ड्रेस हो । यो सुतीको धागोलाई हातले तानमा बुनेर बनाइएको हुन्छ । अर्काे सुदुरपश्चिम थारुको ड्रेस हो । यसमा कपडालाई प्याच गरिएकोछ । उनीहरुले हरेक प्याचको नाम दिएका हुन्छन् । ईम्बोईडरी टेक्निक पनि फरक देखिन्छ ।
त्यसैगरि गुरुङ मगरले लगाउने घलेकको त धागो नै फरक छ । त्यो धागो नै सिस्नुले बनाईन्छ, जुन कपडालाई अलो भनिन्छ । यो तीनवटामै यति धेरै फरकपना छ भने अन्य ड्रेसमाथि पनि अनुसन्धान गरियो भने तिनकापनि पक्कै आफ्नै विशेषताका होलान् । त्यसले मानव सभ्यतासंग जोड्न सक्ला । हाम्रो ईतिहास बुझ्न सघाउला ।
यहाँ लुगामा टाँसेको ब्रान्डको स्टिकर मैले सय जना मान्छेले लगाईरहेको स्टिकर जम्मा गरेको हुँ । यसमा विश्वस्तरका ब्रान्डका नाम छापिएकाछन् । यो संकलन गर्दा मलाई के थाहा लाग्यो भने पहिलो, मेडइन नेपाल लुगा कसैले नलगाउँदा रहेछन । त्यो उपलब्ध नभएर पनि होला । नेपाली भनिने साडी कुर्ता पनि भारत र चीनबाट आउँदो रहेछ ।
अर्काे, ब्रान्ड राखिएका कपडापनि साँच्चिकै ब्रान्ड नभई कपी ब्रान्डका हुँदा रहेछन् । यो कुरा लगाउनेलाई थाहा छ र, पनि तिनले लगाईरहेकाछन् । रिसर्च गर्दै जाँदा पसलेहरुले भनेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । ‘बहिनी जकेटमा नर्थफेसको स्टिकर नराख्ने हो भने त्यो बिक्दै बिक्दैन ।’ एकजना पसलेले भनेकोथिए , ‘ मलाई झन बढी रुचि लाग्यो । खोज्दै जाँदा बिभिन्न ब्रान्डका स्टिकर बेच्ने होलसेल दोकान नै हुँदोरहेछ ।’ यी ट्यागहरु पहिला भारतबाट आउँथे बीस बर्षयता देखि चाहिं सबै चाईनाबाट आउँदो रहेछ ।
यस्ता ब्रान्डका पछाडि मान्छे पागल हुनेगरिको मानसिकता ब्यक्ति एक्लैको नभई सामूहिक रुपले कसरी प्रभावित भएकोहोला ? यस्तो सामूहिक मानसिकता कसरी बन्यो ? के र कसरी हामी प्रभावित भयौं ? हलिउड बलिउड फिल्म हेरेर हो कि, पत्रपत्रिका हेरेर हो कि ? हामीले विभिन्न ब्रान्डका लुगा लगाईरहेकाछौं । त्यसैलाई हामीले ‘स्टैन्डर्ड क्वालिटी’ को मानिरहेकाछौं । त्यो चिन्तन हामीमा कसरी हावी भो ?
हाम्रो आफ्नो ड्रेस चाहिं ‘एथ्निक कल्चरर‘ भन्छौं तर विदेशी ब्रान्डलाई भने सहजै स्विकार गरिरहेकाहुन्छौं, गर्व सहित । हामीले प्रश्न पनि गर्दैनौं । यो मनोबिज्ञान कसरी बिकसित भयो भन्ने प्रश्नले नै मलाई यस्तो काममा डुबाएकोछ ।
सांस्कृतिक उपनिवेशको प्रभाव पर्नुमा हामी आर्थिक रुपले बलिया दुई ठुला छिमेकी देशको बीचमा छौं, जसको उत्पादन क्षमता निकै ठुलो छ । ग्लोबलाईजेसनको यो युगमा ‘ग्लोबल ट्रेड पोलिटिक्स’ ले पनि ठुलो प्रभाव पारेकोछ । त्यसका साथै, आन्तरिक रुपमा हाम्रो राज्यब्यवस्था र त्यसले लिने नीति कस्तो छ त्यसले पनि निर्धारण गर्दौ रहेछ । हामी आफु नै जानी जानी नभई अचेतन रुपमै यसरी साँस्कृतिक वर्चश्वको मोहपासमा फँस्दा रहेछौं ।
Tags: Artree Nepal अंक-४Bikash ShresthaHit Man Gurungissue-4Lavkant ChaudharyMekh LimbuSheelasha RajbhandariSubas Tamangआर्ट ट्री नेपालमेख लिम्बुलभकान्त चौधरीविकाश श्रेष्ठशिलाशा राजभण्डारीसुवास तामाङहितमान गुरुङ